Njengoba ndingumbuki zindwendwe, zithini izohlwayo xa ndirhoxisa ukubhukishela ukuhlala? - Iziko Loncedo lakwa-Airbnb
Njengoba ndingumbuki zindwendwe, zithini izohlwayo xa ndirhoxisa ukubhukishela ukuhlala?
The cancellation fee may be waived in certain other circumstances.
Kutheni ndifumana izimvo ezithi ndirhoxisile?
Ukuba ukubhukisha kurhoxisiwe, kuza kufakwa uluvo ngokuzenzekelayo kwiprofayile yakho.
Fumana ipolisi yokurhoxa yendawo yakho
Imali oza kuyibuyiselwa ixhomekeka kwipolisi yokurhoxa yoMbuki Zindwendwe wakho kunye nexesha nosuku orhoxisa ngalo.